Sexting eo ambanin'ny Lalàn'i Angletera, Wales ary Irlandy Avaratra - The Reward Foundation
Home Sexting eo ambanin'ny Lalàn'i Angletera, Wales ary Irlandy Avaratra
Ny "Sexting" dia tsy fehezin'ny lalàna, fa ampiasain'ny akademika sy mpanao gazety. Na izany aza dia mety hiteraka fanarahan-dalàna henjana ho an'ireo izay miditra ao aminy, indrindra fa ny ankizy, izay mahita azy ho tsy mampidi-doza. Ny polisy dia tokony hamoaka lalàna momba ny heloka bevava maromaro izay hanomezana ny meloka. Jereo ny tabilao etsy ambony ho ohatra vitsivitsy. Research mampiseho fa ny fampiasa matetika amin'ny pôrnôgrafia dia manentana ny sexting sy cyberbullying, indrindra amin'ny ankizilahy.
Teo anelanelan'ny taona 2016 sy 2019, ankizy maherin'ny 6,000 eo ambanin'ny 14 taona no nanaovan'ny polisy fanadihadiana momba ny fandikan-dalàna amin'ny heloka bevava, anisan'izany ny 300 mahery amin'ny taona ambaratonga voalohany. izany lahatsoratra tao amin'ny gazety Guardian dia manasongadina ny sasany amin'ireo olana.
Ny lalàna momba ny serasera 2003 dia mihatra manerana an'i UK. Na izany aza, ny fandikan-dalàna hafa mifandraika amin'ny sexting dia enjehina eo ambanin'ny lalàna samy hafa any Angletera, Wales ary Irlandy Avaratra ary Scotland. Ny famokarana, fananana ary fizarana sarin-jaza tsy mendrika (zaza latsaky ny 18 taona) miaraka amin'ny tsy faneken'izy ireo dia tsy ara-dalàna raha tsy eo ambanin'ny lalàna. Jereo etsy ambony ho an'ny lalàna momba ny heloka bevava be mpampiasa indrindra.
Manangona na manangona sarimihetsika na sary vetaveta amin'ny telefaona na solosaina
Raha toa ianao, na olona fantatrao, dia manana sary na horonan-tsary tsy mahatezitra olona iray izay 18 taona eo ho eo, dia mety hanana sary tsy mendrika amin'ny zaza izy na dia mitovy taona aza izy ireo. Manohitra ny fizarana faha-160 ao amin'ny Lalàna momba ny heloka bevava 1988 ary fizarana 1 of the Fiarovana ny ankizy mihetsika 1978. Ny Sampan-draharahan'ny Fampanoavana an'ny Crown dia hanohy ny fitsarana amin'ny tranga izay heverin'izy ireo fa tombontsoam-bahoaka ny fanaovana izany. Horaisin'izy ireo an-tsaina ny taona sy ny toetoetran'ny fifandraisan'ireo antoko voarohirohy. Raha navoaka an-tserasera tsy misy fanekena ny sary ary miaraka amin'ny fikasana hanala baraka na hiteraka alahelo, dia heverina ho 'valifaty valifaty' izany ary hatolotra eo ambany Lalànan'ny fitsarana heloka bevava 2015 Fizarana 33. jereo Eto ho an'ny torolàlana momba ny fanenjehana any Angletera sy Wales.
Handefa sarimihetsika na horonan-tsary
Raha zaza latsaky ny 18 taona ny zanakao ary mandefa, mampiditra na mamindra sary na video tsy mendrika amin'ny namana na ankizilahy / sipa, dia raha ny marina dia manitsakitsaka ihany koa ny fizarana 1 amin'ny fiarovana ny zaza amin'ny taona 1978. Na dia sarin'izy ireo aza na ny tenany, ny fihetsika tahaka izany dia nanjary 'fizarana' sary maloto nataon'ny ankizy.
Ity dia tsara indrindra Dingana nomen'ny dingana torolàlana ho an'ny Sexting avy amin'ny Ivotoeram-pitsarana momba ny fitsarana ho an'ny tanora. Araka izany Sekolin'ny polisy momba ny polisy, "Ny sary novokarin'ny tanora dia mety hanomboka amin'ny fizarana fifanarahana hatramin'ny fanararaotana. Tsy dia mahasarika ny sain'ny polisy ny sexting mahazatra. Ny fanadihadiana heloka bevava sy ny fanenjehana noho ny fandikan-dalàna naseho tamin'ity torolàlana ity dia mety raha misy ny fiasa manimba toy ny fanararaotana, fanerena, antony ahazoana tombony na olon-dehibe ho mpanao ratsy satria izany dia mety ho fanararaotana ara-nofo ny ankizy (CSA). "
Mampidi-doza ho an'ny asa
Ny tena mampanahy dia na dia ny fanadihadian'ny mpitandro filaminana aza dia hiteraka tovolahy iray voarakitra ao amin'ny Database National Database. Ity zava-misy ity dia mety hipoitra amin'ny fisavana am-piasana amin'ny ambaratonga taty aoriana raha toa ka mila mangataka fampahalalana nohatsaraina ilay olona. Izy io dia hiseho amin'ny fisavana ihany koa na dia ny asa an-tsitrapo aza miaraka amin'ireo olona marefo, ny ankizy na ny antitra.
Fampitandremana ho an'ny ray aman-dreny!
Ny polisy Kent dia efa nanambara ihany koa fa mihevitra mangataka ray aman-dreny amin'ny maha tompon'andraikitra tompon'andraikitra amin'ny fifanarahana ho an'ny finday izay nandefa sary / video nanafintohina.